ကုန်ကြမ်း Everolimus (159351-69-6) HPLC≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အခြားသူများက / Everolimus (159351-69-6)
rating: SKU: 159351-69-6. အမျိုးအစား: အခြားသူများက
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Everolimus (CAS 159351-69-6) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
အရောင်: White ကအစိုင်အခဲဟာ Off
စတီရွိုက်သံသရာအတွက် Everolimus (159351-69-6) အသုံးပြုမှု
Everolimus (CAS 159351-69-6), အမေရိကန် in နာမည်အမှတ်တံဆိပ်: Afinitor, Afinitor Disperz, Zortress ။ နိုင်ငံခြားရေးအမှတ်တံဆိပ်အမည်: Certican, Votubia ။
1) Everolimus နှုတ်ဖြင့်တစ်ဦးတက်ဘလက်အဖြစ်ပေးထားသည်။
3) Everolimus (159351-69-6) အစားအစာနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲခေါ်ဆောင်သွားစေခြင်းငှါ, သို့သော်ကရှေးခယျြမှုနှငျ့ကိုကျညီဆက်လက်ရှိနေရန်အရေးကြီးပါသည်။
4) ဆေးပြားဝါးသို့မဟုတ်နှိပ်စက်ပါဘူး, ရေဖန်ခွက်နှင့်အတူတပြင်လုံးကိုမျိုချ။
① 2.5mg တက်ဘလက်; တဦးတည်းဘက်မှာ "LCL" နှင့်အခြားပေါ်တွင် "NVR" နဲ့ထွင်းတဲ့ beveled အစွန်းနှင့်မျှမတို့ရမှတ်နှင့်အတူအနည်းငယ်အဝါရောင်, elongated အတက်ဘလက်မှဖြူ၏။
② 5mg တက်ဘလက်; တဦးတည်းအခြမ်းနှင့်အခြားပေါ်တွင် "NVR on" "5" နဲ့ထွင်းတဲ့ beveled အစွန်းနှင့်မျှမတို့ရမှတ်နှင့်အတူအနည်းငယ်အဝါရောင်, elongated အတက်ဘလက်မှဖြူ၏။
③ 7.5 တက်ဘလက် mg; တဦးတည်းအခြမ်းနှင့်အခြားပေါ်တွင် "NVR on" "7P5" နဲ့ထွင်းတဲ့ beveled အစွန်းနှင့်မျှမတို့ရမှတ်နှင့်အတူအနည်းငယ်အဝါရောင်, elongated အတက်ဘလက်မှဖြူ၏။
④ 10mg တက်ဘလက်; တဦးတည်းအခြမ်းနှင့်အခြားပေါ်တွင် "NVR on" "UHE" နဲ့ထွင်းတဲ့ beveled အစွန်းနှင့်မျှမတို့ရမှတ်နှင့်အတူအနည်းငယ်အဝါရောင်, elongated အတက်ဘလက်မှဖြူ၏။
သင်ရရှိလိမ့်မည်ဟု everolimus ၏ 7) အဆိုပါငွေပမာဏကိုထူထောင်ထိုးလမ်းညွှန်ချက်များအပေါ် အခြေခံ. သင့်ဆရာဝန်များကသတ်မှတ်ထားသည့်ပါလိမ့်မည်။
8) Mossed ဆေးများဟာမှန်မှန်စီစဉ်ထားအချိန်ပြီးနောက်6နာရီအထိခေါ်ဆောင်သွားစေခြင်းငှါ, Ifit သင်၏ပုံမှန်အချိန်ပေးဖို့လွဲချော်ထိုးခြင်းနှင့် goback skip, ထိုလွဲချော်ထိုးကတည်းက6နာရီသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းသို့မဟုတ်အပိုဆေးများမှာ2ဆေးများမယူပါနှင့်။
Everolimus (159351-69-6) ရက်တွင်သတိပေး
everolimus ယူပြီးဘက်တီးရီးယား, ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်မှိုကနေရောဂါပိုးကူးစက်မှုကိုစစ်တိုက်ခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးလေးနက်သို့မဟုတ်အသက်အန္တရာယ်ရောဂါကူးစက်ရလတံ့သောအန္တရာယ်တိုးမြှင့်ဖို့သင့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုလျော့ကျစေနိုင်သည်။ သငျသညျအတိတ်တွင်အသည်းရောင် (အသည်းရောဂါအမျိုးအစား) ခဲ့ကြပါလျှင်, သင့်ရောဂါကူးစက်တက်ကြွဖြစ်လာပေမည်, သင် everolimus နှင့်သင်၏ကုသမှုစဉ်အတွင်းရောဂါလက္ခဏာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သည်။ သငျသညျရှိသည်သို့မဟုတ်အစဉ်အဆက်အသည်းရောင်ဖူးသို့မဟုတ်သင်ရှိသည်သို့မဟုတ်သင်ယခုရောဂါကူးစက်မဆိုအမျိုးအစားရှိစေခြင်းငှါထင်လျှင်သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သော azathioprine အဖြစ်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကဖိနှိပ်သောအခြားဆေးဝါးများ (Imuran), cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), dexamethasone (Decadron, Dexpak), methotrexate (Rheumatrex, Trexall) ယူပြီးလျှင်သင့်ဆရာဝန်နှင့်ဆေးဝါးကိုပြောပြပါ, prednisolone (Orapred, Pediapred, Prelone), prednisone (Sterapred), sirolimus (Rapamune), နှင့် tacrolimus (Prograf) ။ သငျသညျကိုအောက်ပါရောဂါလက္ခဏာများမဆိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့လျှင်, ချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်ကိုပဌနာ: အလွန်အကျွံမောပန်းခြင်း, အရေပြားသို့မဟုတ်မျက်စိအဝါရောင်; အစာစားချင်စိတ်ဆုံးရှုံး; ပျို့; ပူးတွဲနာကျင်မှု; မှောင်မိုက်ဆီး; ဖြူဖပ်ဖြူရောထိုင်ခုံလုပ်ဖို့; အစာအိမ်၏အထက်ပိုင်းညာဘက်အစိတ်အပိုင်းအတွက်နာကျင်မှု; အဖု, ခက်ခဲနာကျင်, ဒါမှမဟုတ်မကြာခဏဆီးသွားခြင်း, နားကိုနာကျင်မှုသို့မဟုတ်ရေနုတ်မြောင်း, အကှေ့နာကျင်မှုနဲ့ဖိအား; သို့မဟုတ်လည်ချောင်းနာ, ချောင်းဆိုး, ဖျားနာ, ချမ်းတုန်, ကူးစက်မှုမမှန်သို့မဟုတ်အခြားနိမိတ်လက္ခဏာများခံစား။
Everolimus တစ် signal ကို transduction inhibitor ကိုခေါ်ကုသမှုအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ signal transduction inhibitors သူတို့ကိုကြီးထွားခြင်းနှင့်ကိုဝေစေဆဲလ်အတွင်းအချက်ပြအချို့ကိုရပ်တန့်။
Everolimus စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ခြင်းမှ mTOR ဟုခေါ်သောအထူးသဖြင့်ပရိုတင်းရပ်လိုက်နိုင်သည်။ mTOR ကြီးထွားဖို့ကင်ဆာဆဲလ်ဖြစ်ပေါ်အခြားပရိုတိန်းထိန်းချုပ်သည်။ ဒီတော့ Everolimus (159351-69-6) ကြီးထွားလာကင်ဆာရပ်တန့်ရန်ကူညီပေးသည်သို့မဟုတ်နှေးကွေးစေနိုင်သည်။
AASraw ထံမှ Everolimus ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို
Ethisterone အမှုန့် (434-03-7)
Dymethazine (မျဇ) အမှုန့်